Shiinaha Fayraska Corona oo laga dhex helay Jalaato ay soo saarto Shirkad laga leeyahay dalkaasi Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaShiinaha Fayraska Corona oo laga dhex helay Jalaato ay soo saarto Shirkad laga leeyahay dalkaasi
Shiinaha Fayraska Corona oo laga dhex helay Jalaato ay soo saarto Shirkad laga leeyahay dalkaasi
January 17, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Fayraska Corona waxaa laga helay jalaatada laga soo saaro warshadaha Shiinaha ee bariga Shiinaha, shalay, taas oo ku kaliftay dowlada inay codsato in laga saaro shirkadaasi shirkada tayada leh ee wadanka ka jira.
Bayaan ay soo saartay dowladda magaalada Tianjin ayaa lagu sheegay in la xiray shirkadda “Dakiadua Food Limited” oo xuduud la leh caasimadda Beijing, iyadoo shaqaalaha shirkadda ay haatan ku socdaan baaritaanno lagu ogaanayo cudurka Corona.
Ma jiraan wax tilmaam ah oo illaa iyo hadda la xiriira gudbinta cudurka iyo isticmaalka jalaatada
Dawladdu waxay sheegtay in badeecooyinka ugu badan ee ku jira dufcadda 29,000 aan weli la iibin. Waxay intaas ku dartay 390 gasacadood oo lagu iibiyey Tianjin in lagu raad joogo oo maamulada meelo kale lagu wargaliyay iibka aaggooda.
Dawladdu waxay sheegtay in waxyaabaha ay ka kooban yihiin ay ka mid yihiin budada caanaha ee New Zealand iyo budada whey ee laga keeno Ukraine.
Dowladda Shiinaha ayaa suuqgeynaysa sheekada ah in cudurkan oo markii ugu horreysay laga helay bartamaha magaalada Wuhan dhammaadka sanadka 2019, uu ka yimid dibadda.